Mogadishu Journal » 2017 » October » 16
Mjournal :-Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo horay uga tirsnaaa Al-Shabaab ayaa ku tilmaamay qaraxii ka dhacay Zoobe ee dadka faraha badan lagu laayay inuu ahaa mid waxuushnimo ah oo aan Diin iyo caqliga saliimka ah ka turjumeyn. Waxaa uu u tacsiyadeeyay dadkii ku dhintay...
Mjournal -Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa booqday Xarunta Gurmad Qaran, oo ay ka socdaan Howlo lagu caawinayo dadka dhibaatada soo gaartay. Madaxweyne Farmaajo ayaa fariistay qeybta ay ku soo dhacayaan Telfoonada dadka ehelkooda...
World leaders from the United States, UK, Turkey, Canada and France strongly condemned the weekend truck bombing in the Somali capital, Mogadishu, which left at least 276 people dead. Saturday’s explosion – the worst single explosion in the East African country’s history –...
Dad qaba dhaawacyo halis ah loo qaaday dalka Turkiga
Mjournal :-Goordhow waxaa Garoonka Diyaaraha Aadan-Cadde ee Magaalada Muqdisho ka duushay Diyaarada siday qaar ka mid ah dadkii ugu darnaa eek u dhaawacmay qaraxii Maalin ka hor ka dhacay Isgoyska Soobe ee Magaalada Muqdisho. Diyaaradaan ayaa waxa ay ka timid dalka Turkiga iyada...
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo shacabka ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada
Mjournal :-Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed ayaa shacabka Muqdisho ugu baaqay in ay la shaqeeyaan Ciidamada ammaanka, si looga hortago falalka amni daro. Guddoomiyaha ayaa sheegay in loo baahan yahay shacabka Muqdisho in ay ka hortagaan cid...
Ra’iisal wasaare Kheyre oo xalay booqday goobtii uu qaraxa ee Isgoyska Zoobe
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa xalay kormeer ku tagey goobihii ay ka dhaceen falkii argagixiso ee Sabtidiii ka dhacay Isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Ra’iisal Wasaaraha, ayaa goobtaasi kula hadlay Ciidamada...
Wasiirka caafimaadka dalka Turkiga oo Muqdisho soo gaaray
Mjournal :-Waxaa goor dhaw garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ka soo degay Wasiirka Caafimaadka Turkiga Ahmet Demircan iyadoo socdaalkooda uu la xiriiro gurmadka iyo caawinta dadkii ku waxyeeloobay qaraxii argagixiso ee Sabtidii ka dhacay Isgoyska Zoobe, kaasoo ay ku...
Dowladda oo faah faahisan tirada dadka ku dhintay Qaraxii Zoobe
Mjournal :-Dawlada Federaalka ayaa xaqiijisey in 276 ay u geeriyoodeen qaraxii shalay 14ka October 2017 ka dhacay isgoyska Zope ee KM5 ee magaalada Muqdisho, dhaawacana ilaa 300 oo isbitaalada magaalada la kala geeyey. Weli waxaa lagu guda jiro gurmad qaran oo waxii soo kordha...